Flash Vs WISIWYG Editor — MYSTERY ZILLION
Flash Vs WISIWYG Editor
May 2011 edited May 2011 in ASP / ASP.NET
<div>ကျွန်တော် asp.net page တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ajax rich text editor ထည့်ထားတယ်။ ပြီးတော့ run လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာက runtime မှာ ajax rich text editor ထဲကို flash file ကိုထည့်ချင်တယ်။ ajax rich text editor မှာ flash file ဘယ်လိုထည့်လည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော် html view ထဲမှာ အောက်ကအတိုင်း ရေးကြည့်သေးတယ်။ မရဘူး ဘာလိုနေလဲမသိဘူး။ ကူညီကြပါအုံးဗျ။</div><div><br></div><div><object></div><div><embed src="../Test/test.swf"></div><div></embed></div><div></object></div>
အကိုတို့ရေ ရပြီဗျ။ rich text editor ထဲမှာ embed tag ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါဖယ်လိုက်ရင်ရပြီ။
နောက် error တစ်ခု ထပ်ဖြစ်နေပြီ။ Chrome မှာ <embed> tag ကလုံးဝ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ rich text editor တောင် ဟမ်းသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် IE မှာ <embed> tag မပါရင် လုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါမှ ပြသာနာပဲ။ နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြောတာမရှိတော့ဘူးလားဗျ။
လုပ်ကြပါအုံးဗျ ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြပါအုံး။ တစ်ယောက်ထဲပြောနေရတာ ရှက်တောင်လာပြီ :-(
Don't be shy .. I saw your post on stackoverflow. Which editor are you using .. i'm not asp.net developer but I think it depends on frontend .. which editor are you using .. can u give example link so I can check and help you on ..
ရသွားပါပြီခင်ဗျာ။ ပြောပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။ Ajax control toolkit editor ကိုသုံးတာပါ အဲဒီ editor ရဲ့ bug က flash ကို IE မှာ display မလုပ်နိုင်ဘူး FF မှတော့ လုံးဝမလုပ်တာပါ။
You are most welcome for sharing this bug report bro.
Please look at that link http://ajaxcontroltoolkit.codeplex.com/workitem/26919 This is bug report for ajax rich text editor.